Somalisk - Stag
KU SOO DHAWOW KUBADDA CAGTA EE STAG
Stag waa kooxda isboortiga ee dagaanka Stavern, waxaanu sameynaa (ka shaqaynaa) ciyaaraha kubbadda cagta, kubbadda gacanta iyo jimicsiga. Halkaan waxaa ku yaala warbixin yar oo ku saabsan in lagu ciyaaro kubbadda cagta garoonka Stag. Sido kale inta badan waxa halkan ku yaal, kubadda gacanta iyo jimicsiguna waa la mid.
Noorway, waxa caadi u ah inay carruurta iyo dhallinyaradu ka qaybgalaan kooxaha isboortiga oo tababartaan ciyaaraha isboortiga abaabulan gallinyada dambe, iyagoo la soconaya kooxo joogto ah, iyo tababar leh wakhtiyo joogta ah. Ku biirista kooxda kubada cagta waxay ku siineysaa wada jir guud iyo saaxiibtinnomo wanaagsan, oo dhaqdhaqaaqa dhismaha jirku waxuu u fiican yahay caafimaadka, hurdada iyo barashada. Stag anagu waxaan diirada saareynaa abuurista aqoon u yeelasho iyo midnimo.
Hiigsiga aragtida (visjon)
kubbadda cagta Stag waxay Stavern iyo nawaaxigeeda ka dhex abuuri doontaa wada jir, iyo wax lagu faanni karo.
Halkudheg – (hadal kooban oo murti xambaarsan)
Kubadda cagta ee Stag – anagu waan wada ciyaarnaa!
Lugu faanni karo (stolt) – Kalsooni – Kulli – madadaalo
Tabababarayaashu waa tabarruc oo ma helaan mushahar, lakiin naadiga (kooxda isboortiga) ayaa u dammaanad qaadaya koorsooyin iyo waxbarasho kuwa ku soo biiraya tababbarayaasha. Anagu waxaan leenahay kooxaha kubbadda cagta ee fasallada oo dhan laga bilaabo 5 sano ilaa iyo dadka waaweyn, oo wiilasha iyo gabdhaha waxay u ciyaaraan kooxo kala duwan. Kuwa ugu yar yar waxay leeyihiin hal mar oo tababar ah usbuuciiba, oo mar mar ayay ciyaarayaan tartamo ciyaaro isreeb reeb ah.
Laga bilaabo marka carruutu 8 sano gaarto, waxaanu bilownaa ciyaaro taxane ah, laakiin kooxuhu ma helaan dhibco. Waxay ciyaaraan qiyaastii hal ciyaar oo tartan isreeb reeb ah toddobaadkiiba, mark lugu daro tababarka, oo ciyaaraha tartanka isreeb reebka ah waxay noqon karaan agagaarka Vestfold. Tababarayaashu waxay sare u qaadayaan kooxaha, oo waxay diirada saarayaan in la wada ciyaaro oo la helo madadaalo.
Anagu uma kala qaybino kooxaha sida kuwee baa wanaagsan, ama xun. Waalidiintu way raacaaan badanaa, oo way dhiirigeliyaan (heier) marka ay jiraan tartamo, oo arintani waa hab fiican oo lagu baran karo waalidiinta kale. Waxaa la gu heshiinayaa in si wadajir ah loo wado, tasoo lagu xiriirayo barta Facebook-ga (eeg hoos). Marba marka ka dambeysa oo carruurtu sii weynaadaan, waxaa caadi noqoneysa iney ka qaybqaataan labo ilaa seddex tababaro isbuuciiba, oo laga bilaabo da’ada 13 sano waxa caadi sii noqonaysaa in loo kala qaybiyo kooxaha iyadoo la eegayo sida ciyaartoydu u fiican yihiin.
Ciyaarha tartamada ah, anagu waxaan mashquulsanahay in aanu ku qeylino (heie) si kooxda oo dhan u guuleysto. Anigu waan u sacab tumnaa dadaalka wanaagsan, oo waan dhiiri gelineynaa haddii qaarkood guuldareystaan.
Ma eedayno anagu garsoorayaasha ama kuwa nala ciyaaraya (motspillere), oo xitaa ciyaartoydeena ma canaanano. Tartanka ciyaartu waa mid jawi aad u wanaagsan!
Waa caadi sidoo kale inay kooxaha qaarkood ka qaybqaataan tartamada koobabka ee aaggaga dhow, markaa iyada ah waxaa la ciyaarayaa ciyaaro badan Sabtida iyo Axadda. Stag anagu waxaan dhaqan u leenahay kooxdu in ey u safraan ka qaybqaadasho tartan koob weyn oo leh habeen-seexasho (overnatting) xagaaga uu ciyaartoydu noqdo12 sano jir.
arintani waa iskaa u dooro oo qofku waxuu helayaa warbixin tiro badan wakhti hore.
Macluumaadka / xiriirka lala yeelanay tababarayaasha iyo kooxda
Dhammaan kooxuhu waxay ku leeyihiin barta Facebook-ga kooxdooda u gaarka ah. Halkaan waxaa muhiim ah in la ahaado / galo oo lala raaco, maxaa yeelay meeshaan waxaa imaanayaan /ku yaala dhammaan warbixinada ku saabsan tababarada, tartamada ciyaaraha ah, shaqooyinka tabaruc ah iyo munaasabadaha bulshada. Qofku waxuu sidoo kale ka heli karaa qaar ka mid ah warbixinta Steg.no, lakiin waxa ugu badnaa ee ey muhiim u tahay waa, in koox kasta laga helayo barta Facebook-ga.
Anagu waxaan qabanqaabinaa sidoo kale kulamada waalidiinta wakhtiyada gu’ kasta iyo deyr kasta. Halkaan waxaa muhiim ah in laga qayb galo, maxaa yeelay halkaan waxaad ka helaysaa warbixinada ku saabsan qorshayaal iyo waxay tababarayaashu u maleynayaan inay muhiim tahay. Badnaa, kulamada waalidiintu sidoo kale waa goob u leh bulshada xiiso muhiim ah, iyo fursad wanaagsan oo lagu baran karo waalidiinta kale.
Kharashaadka (khidmadaha) / ceymiska
Ciyaartoyda waxay bixinayaan labo kharash (khidmaddood). Midi waa kharshka xubinnimada naadiga isboortiga Stag. Tan kalena waa kharashka tababarka oo loogu talagalay kubada cagta Stag. Kharaska xubinnimada waa 700 kr. Kharashka tababarka da’ada ilmaha ayuu ku kala duwan yahay oo waxuu u dhexeeyaa 1050 iyo 2400 kr. Kharashka xubinnimad ee ururka weyn waxuu daboolayaa kirada garoonka, dayactirka dhismaha iyo socodsiinta ururka isboortiga. khidmada tababarka ee kooxda kubbadda cagta waxuu daboolayaa qalbka tababarka, diiwaangalinta kooxda ee koobabka iyo tartamada ciyaaraha, iyo munaasabadaha wadajirka ah.
Dhammaan ciyaartoyda waa inay isu diiwaangeliyaan inay xubno ka yihiin Naadiga Ciyaaraha Stag. Ciyaartooygu waxuu ku jiraa caymiska kooxda marka la bixiyo khidmada xubinnimada iyo khidmada tababarka.
Tani waa muhiim maxaa yeelay waxay daboolaysaa kharashaadka haddii uu ciyaaryahanku ku dhaawacmo tababarka ama tartanka ciyaaraha(kamp).
Qoysaska leh hal ciyaartooy ka badan (sidoo kale way quseeyaan kubbadda gacanta iyo jimicsiga) waxaa lagula talinayaa in ey bixiyaan kharashka xubinnimada qoyska, maadaama ay ka raqiisan tahay.
Anaga waxaa muhiim noo ah naadiga gudihiisa in qofna iska dhaafin in uu ciyaaro kubbadda cagta sababtoo ah dhaqaale. Sidaa awgeed waxaan leenahay nidaam kaasoo suuragalinya in qofku heli karo caawimaad uu ku bixiyo khidmada xubinimada haddii loo baahdo. La xiriir tababaraha kooxda ama Jøn Aderson haddii aad su’aalo ka qabtid arintan.
Tartamada ciyaaraha kubbadda cagta (kamper) waxaan ku ciyaarnaa sigsaan leh midab cadaan iyo cagaar, iyo surwaal dabagaab oo cagaar ah. Funaanadaha waxaa qaybiya macalinka tababaraha ah ciyaar kasta oo la soo aruurin, oo wadjir ayaa loo dhaqayaa markaa kadib.
Tababarka, carruurtu waxay xiran karaan wax kasta waxii ay rabaan kuwasoo raaxo u leh dhaqaaqa. Kala hadal tababaraha waxii ku saabsan waxa u wanaagsa inay xirtaan marka kooxu ku tababaranayaan dibada xilliyada qaboobaha ama hawada roobka!
Waxaa ugu fiican in lagu ciyaaro kabaha kubbadda cagta, waana muhiim in dhammaantood haystaan maqaarka difaacaha lugta (leggskinn) marka tababarka iyo tartanka ciyaarta kubbadda cagta(kamp). Caymisku ma bixinayo haddii ciyaaryahanku dhaawacmo oo ey san u xirnayn maqaarka difaaca lugta (leggskinn), sabatoo ah arintani waxay u hoseedi kartaa khatar ah lugta oo jabta.
Stag, anagu waxaan qabanqaabinaa maalmaha baddelaada oo leh wakhtiyo joogta ah, halkaas qofku waxuu ka dhaxli karaa dharka tababarka ee dadka kale aad uga yar, oo waxuu keenayaa dharka uu ka korey.
Shaqo iska wax u qabso ah. (dugnad)
Waaliddiinta Stag waa inay ku talo galaan caawinta shaqo tabarruc ah (dugnad) mararka qaar kood. Tani waxay uga dhagaysaa raqiis in ilmuhu ka qaybqaato ciyaaraha wakhtiga firaaqada! Mararka qaarkood waxaa laga codsadaa waalidiinta ka socda kooxaha oo dhan in ey ka qaybgalaan, tusaale, marka Stag ey qabanqaabineyso koobkeeda kubbadda cagta ee gaarka u ah. Mararka qaarkood waxaan heysanaa shaqo iska wax u qabso ah oo aan ku nadiifino hareeraha garoonka ciyaarta oo waxaan fulinaa howlaha lagama maarmaanka ah. Sidoo kale waxaa caadi ah in kooxuhu isbadalaan si ey mas’uul uga noqdaan dukaanka yar ee Stagbanen lixdii biloodba mar. Lacagta kooxdu ka hesho halkan, waxay aadaysaa si ay daboosho kharashaadka marka kooxdu u safrayaan ciyaar koob. Warbixinta ku saabsan howlaha iska wax u qabso (dugnader) markasta waxay ku yaalaan barta Facebook-ga. Shaqada tabarruca ah (dugnad) waa muhiim, oo inta badan sidoo kale waa la xiriirka bulshada iyo hab fiican oo lagu barto walidiinta kale.
Dhammaan dadka waaweyn ee ka shaqeenaya carruurta iyo dhalinyarada ilaa iyo 16 jirka ah, waa inay naadiga u keenaan cadeyn booliis – politiattest.
Cadeynta booliisku waa warbixin rasmi ah oo ka timaada booliiska si loo hubiyo in dadka lagu xukumey falalka dambiyada ka dhanka ah carruurta, sida xoogida iyo tacadiga, aysan qaban karin mas’uuliyadda shaqada tabarrucnimada ee carruurta iyo dhallinyarada. Arrintan ujeedkeedu waa in aan anagu nabadgalyo helno markaan carruurteena u dirno dhaqdhaqaaqa wakhtiga firaaqada.
Ku soo dhawow naadiga!
Way fiican tahay inaad nala soo xiriirto haddii aad wax su’aalo aad qabtid.
Kubbadda cagta ee Stag – Anagu waan wada ciyaarnaa!